Ukuqala kweToluna: Ukuhlakanipha kwabathengi besikhathi sangempela nomphakathi womhlaba wonke | Martech Zone
Ukuqala kweToluna: Ukuhlakanipha kwabathengi besikhathi sangempela nomphakathi womhlaba jikelele
NgoLwesine, ngo-Okthoba 29, 2020 NgoLwesine, ngo-Okthoba 29, 2020 Douglas Karr
I-Toluna Start iyipulatifomu yokuhlola abathengi yabashesha, yokuphela, ukuphela. Imikhiqizo inikeza ukuqonda kwamakhasimende, ucwaningo lwemakethe, futhi inika amandla amaklayenti ukuthi enze ngokushesha ucwaningo oluningi nolusezingeni ngesikhathi sangempela. Ngokungafani nezinkundla zokucwaninga zemakethe zendabuko, iToluna ihlanganisa bobabili ubuchwepheshe obudingekayo kanye nokufinyelela emphakathini womhlaba wonke ukuhlinzeka ngolwazi oludingayo.
Noma ngabe kushesha ukuthuthukiswa komkhiqizo noma ukuhlolwa komkhiqizo nemilayezo yezokuxhumana, iToluna inesikhulumi sezobunhloli sabathengi sokukusiza ocwaningweni lwakho lwemakethe lwabathengi:
Ubunhloli babathengi - Finyelela kumthombo owodwa wayo yonke imininingwane yabathengi bakho. I-Toluna Start iyipulatifomu yezobunhloli yokuphela kokuphela futhi inokungena ngemvume okukodwa. Finyelela kuzisombululo ezahlukahlukene zokuqonda ezizenzakalelayo ezihlanganisa ukwakheka kocwaningo, abaphenduli bocwaningo oluhlanganisiwe, kanye nokubikwa kwamadeshibhodi kufaka phakathi imininingwane nezincomo.
Izibalo namaDeshibhodi - Finyelela idatha yakho khona manjalo. Kusuka kumibiko yenkambu yesikhathi sangempela nezimpendulo zezwi nezwi ekuhlaziyweni okuthuthukile kakhulu. Linganisa ukusebenza ngokuqhathanisa nama-KPI ngemizuzu ngamadeshibhodi aklanyelwe ukuhlinzeka ngemininingwane engasebenza. Idatha yesisindo, yakha abantu abancane, hlunga futhi uqhube wonke amazinga wokuhlola okubalulekile. Hudula bese uphonsa amaslayidi e-PowerPoint, amagama wamafu wamagama, yakha amatafula, uphinde uqalise amabhanela njengoba kudingeka.
Imiphakathi Nezingxoxo Ezikhona - Bandakanya ngokushesha nabantu ababaluleke kakhulu kumkhiqizo wakho. Bamba ujule futhi wembule imizwa nezisusa eziqhuba isimilo sabathengi. Thuthukisa imiphakathi yamabhizinisi ebonakala ngokugcwele futhi ibamba iqhaza kakhulu — noma ngabe uyimakethe oyiphiwe. Setha ingxoxo ebukhoma enophawu kumzuzu nje bese uzibandakanya nezithameli zakho eziqondiwe.
Imininingwane Yokuziphatha - Qonda ukuziphatha kwabathengi kuwo wonke amaselula kanye nedeskithophu, amawebhusayithi, nezinhlelo zokusebenza. Kufaka phakathi izinhlelo zokusebenza ezifakiwe, amaphethini wokuzulazula, ukusebenza kokuphequlula, ukusebenza kwosesho, nemininingwane yokuthenga kubathengisi abakhulu emhlabeni.
Ukusampula okuzenzakalelayo - Abaphenduli bokufinyelela ngesikhathi sangempela. Intengo, hlola ukuthi kungenzeka yini futhi uqalise amaphrojekthi ngemizuzu. Isixazululo sesampula sikaToluna esizenzekelayo sinikeza abacwaningi umugqa oqondile emphakathini wethu onethonya wabaphenduli abasebenza kahle, abazibophezele kakhulu.
Umphakathi wePaneli Yomhlaba Wonke - Thepha emandleni abantu abangaphezu kwezigidi ezingama-30 emhlabeni wonke. Amalungu ethu alungile, azimisele, futhi akwazi ukunikeza impendulo oyidingayo, konke ngesikhathi sangempela ukukhokhisa izinqumo zakho. Bhekisa abathengi kuzo zonke izimakethe ezingama-70 + usebenzisa amaphrofayli angaphezu kwe-200 enziwe ngabantu kanye nokuziphatha.
Imisebenzi Yokucwaninga - Ochwepheshe bendlu kaToluna bahlanganiswe nenkampani kadadewabo Harris Ezisebenzayo Unobuchwepheshe obuqonde mpo obungenza okungaziwa, kwaziwe. Ubuchwepheshe babo buhlanganiswe nezixazululo zethu ezizisebenzelayo. Noma bangaklama uhlelo lwangokwezifiso nesazi socwaningo. Noma iyiphi insizakalo ihlangabezana nezidingo zakho.
Hlela i-Toluna Start Demo
Tags: izibonelo zalokho okuzenzakalelayoukuziphatha kwabathengiukuqonda komthengiizingxoxo ezibukhomaucwaningo lwemaketheizinsizakalo zocwaningotoluna
Abalandeli beZombie: Abafileyo Bahamba Emhlabeni Wokukhangisa Okunomthelela
Uma ungazi ukuthi iyini i-WordPress Child Theme…